Zapya - File Transfer, မျှဝေခြင်း | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » productivity Apps ကပ » Zapya - File Transfer, မျှဝေခြင်း
Zapya - APK ကိုမျှဝေခြင်း, လွှဲပြောင်း File
အသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီး iOS, Android နှင့်အခြားပလက်ဖောင်းများမှတစ်ဆင့်လွှဲပြောင်းခြင်းကိုထောက်ပံ့ပေးသောအကောင်းဆုံးဖိုင်မျှဝေခြင်း application ကို အသုံးပြု၍ ဖိုင်များကိုလျင်မြန်စွာမျှဝေပါ။
ဖိုင်များဝေမျှရန်လိုအပ်သော်လည်းအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမရှိပါ ပြဿနာမရှိပါဘူး! Zapya Android ဖုန်းများ၊ iPhone များနှင့်ပီစီများမှဖိုင်များကိုလွှဲပြောင်းရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည် Wi-Fi သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဒေတာကိုမသုံးပဲ. Zapya မဟုတ်ပါဘူး အခမဲ့ အသုံးပြုရန်ဖြစ်သော်လည်း 20 ဘာသာရပ်များကိုလည်းအထောက်အပံ့ပေးသည်။ ဖိုင်ပြောင်းခြင်းသည်မလွယ်ကူပါ။
ရရှိနိုင်သည့်လွှဲပြောင်းရန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းလေးခုအနက်မှတစ်ခုကို အသုံးပြု၍ သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသူများနှင့်ဖိုင်များကိုမျှဝေပါ Zapya. အုပ်စုတစ်ခုဖန်တီးပါ နှင့်အခြားသူများက join ဖို့ဖိတ်ကြားတစ် ဦး generate ကိုယ်ပိုင် QR ကုဒ် အခြားသူများစကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်၊ ချိတ်ဆက်ရန်လှုပ် အခြားစက်တစ်ခုသို့ရိုးရိုးလေးဖြစ်သည် အနီးအနားရှိသူတို့အားဖိုင်များကိုပို့
သင်ကြီးမားသောဖိုလ်ဒါများလွှဲပြောင်းရန်လိုအပ်သည့်အခါ Zapya ထက်မပိုရှာပါ။ ဖိုင်များစွာကိုဖိုင်တစ်ချက်တည်းဖြင့်မျှဝေနိုင်သည်။
⚡“ All Install” Option
သင်၏ PC၊ သင့်သူငယ်ချင်းဖုန်းသို့မဟုတ်သင့်ဖုန်းအဟောင်းထဲမှ APKs မှသင်ရွေးချယ်နိုင်သော“ Install All” ရွေးစရာအသစ်ဖြင့်သင်၏ကိရိယာသို့သင်လိုချင်သည့် app အားလုံးကို download လုပ်နိုင်ပါပြီ။
Zap Zapya ကိုအခြားပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်ကူးယူရန် ကျေးဇူးပြု၍ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
application လျှောက်လွှာ၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ https://www.izapya.com/Agreement တွင်ကြည့်ရှုပါ
the နောက်ဆုံးသတင်းများနှင့်နောက်ဆုံးသတင်းများအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ -
အချို့သောအခြေအနေများတွင်ဟော့စပေါ့အုပ်စုများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ပျက်ကွက်သည့် Android 10 ထုတ်ကုန်ပြissueနာကိုဖြေရှင်းခဲ့သည်။
Zapya - ဖိုင်လွှဲပြောင်းခြင်း
10.66 ကို MB
Zapya Go- အခမဲ့ ...
michel stadham says:
ဇန်နဝါရီလ 11, 2016 မှာ 2: 04 နံနက်
မည်သို့ဈ iOS အတွက် Download ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်
eliah theeda says:
မတ်လ 27, 2015 မှာ 11: 23 ညနေ
ကိုယ်က၎င်း၏ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံး app သစ် Zapya ထင်! ယင်း၏ vry Gud app ကိုဟုယောက်ျားတွေအချို့ကို။
ဧပြီလ 21, 2015 မှာ 8: 15 နံနက်
Eliah Zapya အပေါ်ကြီးစွာသောမှတ်ချက်များကိုနားထောငျဖို့အတှကျဝမျးသာ theeda ဟေ့, ငါ့ကိုသငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုကိုသိခဲ့ဘူးပုံကိုသိပါစေနိုင်မည်နည်း နှင့်သင်မည်သို့ကျွန်တော်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့တာလဲ ကြေးဇူးတငျစကား
Krishna ဟိန္ဒူ says:
ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2014 မှာ 11: 51 နံနက်
ဒါဟာကျွန်မရဲ့ BSNL PENTA ws708c tab မှာအလုပ်မလုပ်သည်မဟုတ်။
အောက်တိုဘာလ 1, 2014 မှာ 5: 10 ညနေ
အလွန်ကောင်းသော app များကိုအလွန်အစာရှောင်ဖမ်းငါသည်ဤလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ apps များကဘလူးတုသ်။ ZAPYA အက်ပ်များ။ ကြေးဇူးတငျစကား
စက်တင်ဘာလ 28, 2014 မှာ 9: 26 ညနေ
ကြောက်မက်ဘွယ် app ကို superbbbbbbb
phyre ငှက် says:
ဇူလိုင်လ 5, 2014 မှာ 4: 11 ညနေ
အဲဒါကိုအပြည့်အဝပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်သောကများကအထင်းနေသည်ဘယ်သို့ပြုနိုင်လျှင်, ငါ့ထံမှ၎င်း၏ 5stars ။
Ashok Kumar က Biswal says:
ဇူလိုင်လ 1, 2014 မှာ 2: 43 ညနေ
android & Windows အတွက်အလွန်ကောင်းတဲ့ app များကို
ဇူလိုင်လ 1, 2014 မှာ 2: 44 ညနေ
ဒူလ် Ganiu lbrahim says:
ဇွန်လ 29, 2014 မှာ 10: 50 နံနက်
ဘယ်လိုကိုယ်ကဒီ Fone pls ကွပါ၏နိုင်ပါတယ်